မေတ္တာရှင်မလေး ပေါ်လီယာနာ – Pann Satt Lann Books
၀တ္ထု၏ဇာတ်ကြောင်အကျဉ်းမှာ ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိသော အမျိုးသမီးကလေး ပေါ်လီယာနာသည် မိဘ ၂ ပါးစလုံး ဆုံးပြီးနောက်၊ ရပ်ဝေးနေ မိမိအဒေါ်ထံ လာရောက်ခိုလှုံရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူကလေးသည် သူ့ဖခင်က သူ့အား သင်ကြားထားခဲ့သော “ဝမ်းသာစရာအကြောင်းကို ရှာတတ်လျှင် ဝမ်းသာစရာအကျိုး ဖြစ်ပေါ်၏။” -ဟူသော တရားနတ်စည်ကို ရွာရိုးလျှောက်၍ ရွမ်းလေတော့သည်။ သို့ရွမ်းလေရာတွင် ရွာဘုန်းကြီး အစ , နာတာရှည်လူမမာအလယ် , ကြောင်လေခွေးလွင့် အဆုံး တစ်ရွာလုံးရှိ ဒုက္ခသည်များအားလုံးသည် နှခလုံးမသာ မျက်နှာမလှဖြစ်နေရာက ပြုံးတပျော်ပျော် ဖြစ်လာကြသည်။ “လူများတယ်ခက်သနော်’ -ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြုလျက် လူအများ၏ အကျည်းတန်ပိုင်း အဆိုးဘက်ကိုသာ မြင်တတ်ကြည့်တတ်ခြင်း၊ အလေ့အထဖြင့် ဘ၀မုန်းအထီးကျန်ဖြစ်နေသူများ၊ ဘ၀ဇာတ်လမ်း လွမ်းခန်းတစ်ခုခုမှ နာလန်ပြန်မထနိုင်သော သုန်မှုန်ဆွေးပူနေသူများ၊ နာတာရှည်ဖြင့် တစ်သက်လုံး အိပ်ရာပေါ် လဲနေသူများ စသည့် ရွာရိုးရှိ ဒုက္ခအမှောင်တွင်းများကို သူ လိုက်လံဟောပြောသော တရားအလင်းသည် နေ၏သဖွယ် ကုန်အောင်လင်းစပြုသည်။
ပန်းရွှေပြည်စာပေ၊ 2017 အောက်တိုဘာလ၊ (န၀မ – ကြိမ်)
မေတ္တာရှင်မလေး ပေါ်လီယာနာ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု5ရှိပါသည်။
Ei Khaing Khaing Zin – September 6, 2020
စာအုပ်ဟောင်းလေးဖြစ်ပေမယ့် လူတိုင်းဖတ်သင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ဖတ်ရန်ညွှန်းဆိုရသည့်အချက်မှာ လေးစားထိုက်သောဇာတ်ကောင်ပေါ်လီယာနာ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အပြုအမူကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။ သူမနှင့်တွေ့လျှင် လူတိုင်းပျော်ရွှင်သွားရသည်။ စာဖတ်ရင်းနှင့်ပင် အပျော်များကူးစက်သလိုခံစားရသည်။ဒေါသမရှိ၊လောဘမရှိသော ပေါ်လီယာနာသည် ချစ်ဖို့ကောင်းလှသည်။ ရုပ်ရည်လှပလွန်း၍မဟုတ်။ သူမ၏ အရာရာအပေါ်တွင် ဝမ်းသာစိတ်ဖြင့်ကြည့်တတ်သော စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရယ်အပြုံးခဲလှသော၊ခက်ထန်မာကြောသော သူမအဒေါ်သည်ပင် သူမကြောင့်နူးညံ့လာရသည်။
အမြဲသောပြုံးနေသောပေါ်လီယာနာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည် ဝမ်းသာစရာရှာခြင်းကစားနည်းဖြစ်သည်။
သူမ၌မရှိသောအရာကိုမတောင့်တဘဲ၊ သူမမြင်တွေ့ရသောအရာများ၌ ဝမ်းသာတတ်သော ပေါ်လီယာနာ၏စိတ်ဓာတ်သည် လေးစားအတုယူဖွယ်ကောင်းလှသည်။ သူမခြေထောက်ကျိုးသွားသည်‌ကိုပင် စိတ်မပျက်ဘဲ ‘အခိုက်အတန့် သမီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားတာကိုတောင် ဝမ်းသာရမယ်လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်ရတာဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မလျှောက်နိုင်တဲ့အခါမှ သိတာ အန်တီရဲ့’ ဟုဆိုသော သူမသည် စာဖတ်သူများ၏ရင်ထဲသို့ messageတစ်ခုခုထည့်ပေးနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့်ဖတ်ကြည့်ဖို့ညွှန်းချင်သည်။
Nin Nin Dkt – September 6, 2020
ဆရာထင်လင်းဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ ဒီစာအုပ်က ၁၉၁၂ခုနှစ်ကသထုတ်ခဲ့သလိုခုချိန်ထိမတိမ်ကောသေးပဲ အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ဝေ ရာ အုပ်ရေ၄သန်းကျော်ရောင်းရနေပါပြီ ပြီးလျှင်ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီးတွေကိုသရုပ်ဆောင်ခိုင်းပြီး ရိုက်ကူခြင်းပြသခြင်းလဲအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်..
ဒီထဲမှာတွေ့ရမှာကတော့ အသက်၁၁နှစ်သာရှိသေးတဲ့ကလေးမရဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်”ဝမ်းသာတမ်းကစားနည်း”ပဲဖြစ်ပါတယ်.?
– အသက်ကြီးလို့ ခါးကုန်းပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့တဲ့အဖိုးကြီးကို.. ဘဘ..ခါးတစ်ဝတ်ကုန်းနေတော့ မြေပေါက်တဲ့အခါ တစ်ဝတ်ကုန်းရသက်သာ သာပေါ့နော်
– အုပ်ထိန်းသူသူ့အဒေါ်ကအပြစ်ပေးသာတောင် အပြစ်လို့မခံယူပဲဆုလာဘ်လို့ခံယူတယ် ??
Yadanar Soe – November 22, 2020
အမေရိကန်စာရေးဆရာမကြီး ELEANOR H. POTER မူရင်းရေးသားခဲ့ပြီး ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ အကြိမ်များစွာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။
ဒီစာအုပ်လေးကို ညီမ ၁၀ နှစ်သမီးလောက်ကဖတ်ခဲ့ဖူးပြီး ခုထိလည်း မြင်လိုက်တိုင်း ဖတ်ချင်နေတုန်းပါ။ဇာတ်ကောင် ကလေးမလေးကလည်း ကိုယ့်အရွယ်မတိမ်းမယိမ်းလေးဆိုတော့ အဲ့ဒီပေါ်လီယာနာဆိုတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ အပြုအမူအကြောင်းအရာလေးတွေက ကလေးဘဝထဲကနေခုချိန်ထိ စိတ်ထဲမှာစွဲနေမိတယ်။
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရတာမလို လိုတာမရဖြစ်နေတဲ့သူတွေ
ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ် မကျေနပ်ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေ ၊ အရာရာမှာ အဆိုးကိုဘဲ တွေးတတ်သူတွေကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကောင်းမြင်တတ်ဖို့နဲ့ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြားအရာတွေကိုပါ အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့ နေထိုင်နည်း တွေးတောနည်းလေးတွေကို ဒီဇာတ်ကောင်လေးက လမ်းပြပေးခဲ့တာပါ။
စကားတတ်လွန်း အလိုက်သိလွန်း အရာရာကိုအကောင်းဘက်ကတွေးပြီး လူတိုင်းအပေါ်ကို ဖေးမတတ်လွန်းသော ပေါ်လီယာနာဆိုတဲ့ ကလေးမလေးကြောင့် တစ်မြို့လုံးကလူတွေ ဝမ်းသာစရာရှာတမ်း ကစားတတ်သွားကြတယ်။ကိုယ့် အားနည်းချက်ကို ကျော်ပြီး အားနည်းချက်ကြောင့်ရလာတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို အားသာချက်အဖြစ်ပြောင်းပြီး ဝမ်းသာရတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ။
အားနည်းချက် အားသာချက်ဆိုတာ အမြဲတွဲမလာခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းအရာတိုင်းမှာ ဖြည့်တွေးပြီးနေတတ်ရင် ပျော်စရာတစ်ခုတော့ ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
အခုလို ကပ်ရောဂါကြောင့် stay home ကာလမှာ ညီမတို့မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေများနေပေမဲ့လည်း
မိသားစုနဲ့ ပိုရင်းနှီးစေတာ စာအုပ်တွေပိုဖတ်ဖြစ်တာ
ကိုယ့်လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ခုချိန်မှာ အလွယ်တကူလေ့လာဖြည့်ဆည်းခွင့် ရနေတာလေးက ဝမ်းသာစရာပါ။
အရမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး တိုးတက်လွန်းနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့လည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ အလှူရှင်တွေရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာနေရတာလည်း ညီမတို့အတွက် ပျော်စရာပါ။
လူတိုင်းမှာ အကောင်းမြင်စိတ် အဆိုးမြင်စိတ် နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တတ်ကြတာပါတယ်။အရာရာကို အဆိုးမြင်စိတ်များလာပြီလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံစားလာရတဲ့ချိန်တွေမှာ ညီမဒီစာအုပ်လေးကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာ ကြိုးစားအားထုတ်ရမဲ့ အချိန်တွေရှိသလို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်ရမဲ့ အချိန်မှာလည်း အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေနပ်တတ်ဖို့အတွက် ဒီစာအုပ်လေးကိုမဖတ်ရသေးရင်ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်။
Sabito – January 20, 2021
စစဖတ်ချင်းတုန်းကတော့ဒီတိုင်းဝတ္ထုလေးလို့ပဲထင်ခဲ့မိပေမဲ့ပေါ်လီယာနာလေးလို အကောင်းမြင်တဲ့တတ်စိတ်နဲ့သာကြည့်ရင် ကိုယ့်မှာတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့တွေးမိသွားတယ် ကိုယ်ပိုက်ဆံ နဲနဲပဲရှိတယ်ဆိုပါဆို့ ပေါ်လီယာနာလေးလိုအမြင်နဲ့ပိုက်ဆံတပြားမှမရှိတာထပ်စာရင် အများင်္ကြးကောင်းပါလားလို့တွေးမိတယ် ဖတ်ကြည့်ကြပါ သိသိသာသာပြောင်းလဲလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်?
Mg Zwe Lin Htut – July 20, 2021
ဒီစာအုပ်ကလူငယ်တိုင်းဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသင်ခန်းစာတေွအများကြီးရပါတယ်။စာရေးဆရာမ ELEANOR H.PORTER ရဲ့အရေးအသားကောင်းမွန်မူ စာရေးဆရာထင်လင်းရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကောင်းမွန်မူတေွကြောင့် ဒီစာအုပ်ကစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မဖတ်ရသေးတဲ့သူတေွအနေနဲ့ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်……….